मलाई दाँतको कमी किन छ?
सपना भविष्यमा हेर्न को लागी एक मौका प्रदान गर्दछ र बिभिन्न समस्याहरु वा खुसी घटनाहरु बारे जान्दछन्। व्याख्यामा यो मुख्य वस्तु र साजिशको अन्य विवरणहरू खातामा लिन आवश्यक छ। उदाहरणको लागि, यदि दाँत बाहिर गयो भने, रगत थियो कि याद राख्ने प्रयास गर्नुहोस्, यदि यो पीडा थियो र कस्तो परिस्थितिमा यो भयो। साथै, सही जानकारी प्राप्त गर्न, यो वास्तविकतामा घटनाहरू भएको प्राप्त ट्राईक्रिप्टहरूको तुलना गर्न आवश्यक छ।
यदि तपाईं अचानक एक दाँत गुमाउनुहुन्छ भने, वास्तविक जीवनमा त्यहाँ एक अपरिहार्य डर छ । सम्भवतः यो एक प्रियको बीमारी वा महत्त्वपूर्ण समस्याहरू सुल्झाउनु अघि उनीहरूको क्षमतामा अनिश्चितताको कारण हो। अर्को सपना पुस्तकमा त्यहाँ जानकारी छ कि दाँतको घाँटीको सपना दुखी खबर प्राप्त गर्ने हानिकारक हो, जसले ठूलो मात्रामा मनको अवस्थालाई असर गर्नेछ। यदि दाँतको बेरोजगारीको समयमा तपाईंले कुनै पनि दुखाइ महसुस गर्नुभएन भने, चाँडै तपाईंलाई केही समस्या र दुरुपयोगको आशा गर्नुपर्छ। सबै दाँत गुमाउनु एक विनाश को हानिकारक हो। यो पनि एक प्रतीक हुन सक्छ कि तपाईं केहि व्यवसायमा असामान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। नाइट भिजुअल, जसमा तपाइँ एक दाँतहीन अर्को व्यक्तिलाई देख्नुहुन्छ, तपाईंलाई भन्नेछ कि तपाई सबै बासहरू र दुश्मनहरूको जाललाई बताउन सक्नुहुन्छ। सपनामा दाँतको घाँटी देख्न को लागी मतलब छ कि तपाईं एक कष्टप्रद व्यक्तिबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वा बिचारका विचारहरू। यो पनि सल्लाहको रूपमा लिन्छ कि एक आफ्नो आफ्नै कार्य र अरूका कार्यहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।
रात्रि दर्शन, जो सख्त वा चिसो दाँत बाहिर गयो, केहि रोगको विकासको अनुमान गर्दछ। यदि तपाइँ आफ्नो दाँतहरू निस्कनुभयो भने, तपाईं चाँडै खराब महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। सपनाको व्याख्या सुझाव दिन्छ कि गम्भीर समस्याहरूबाट बच्न तपाईं आफ्नो स्वास्थ्यको अधिक हेरचाह लिनुहुन्छ। आउनुहोस् कि सपना भनेको लडाइँको कारणले दाँतको क्षतिको बारेमा के हो। यस अवस्थामा, केही अवस्थामा समस्या हुन सक्छ। यस्तो सपनाले पनि नियोजित योजनाहरु को लागी संदेह को उद्भव को प्रतिज्ञा गर्दछ। यदि तपाइँ आफ्नो दाँतसँग आफ्नो दाँत धकेल्नुहुन्छ भने, त्यसपछि भविष्यमा तपाईले नजिकको सहयोगीबाट पहिचान प्राप्त गर्नुहुनेछ। अझै पनि विभिन्न पापीहरू छुटकारा पाउन को प्रतीक हुन सक्छ।
दाँतको क्षतिको बारेमा सपनाहरूको अर्थ तिनीहरूको संख्यामा निर्भर हुन्छ। यदि तपाईंले एक दाँत गुमाउनुभयो भने - यो खराब समाचार प्राप्त गर्ने हानिकारक हो। नाइट दृष्टि, जहाँ2दाँत गिरियो, अनुचित परिवर्तन र विभिन्न समस्याहरु को चेतावनी दिन्छ। यदि त्यहाँ3हराई दाँतहरू थिए भने, तपाईं गम्भीर दुरुपयोगको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सपना जुन तपाईंले अर्को व्यक्तिको दाँत देख्नुहुन्छ एक नजिकको समाजमा अप्रिय मानिसहरूको उपस्थिति बताउँछ।
दाँतको क्षतिको बारेमा सपनाहरूको व्याख्या निर्भर गर्दछ कि रगत थिएन वा छैन। यदि तपाईंले यो देख्नुभयो - यो एक नकारात्मक चिन्ह हो जुन गम्भीर बीमारीको उद्घोषणा वा प्रिय प्रेमको मृत्युको प्रतिज्ञा गर्दछ। सपना व्याख्या भन्छन्, कि तपाईं लामो समयको लागि हानि अनुभव गर्नुहुनेछ। रगत बिना दाँतको घाँटीको सपना अत्यधिक आत्म-भरोसाको अभिव्यक्ति हुन सक्छ। यसले सुझाव दिन्छ कि यो तपाईंको महत्त्व पुष्टि गर्न समय हो, किनकि असफलताको जोखिम हो। यदि दाँत बिना रगत भयो, र तपाईं यसलाई आफ्नो हातमा राख्नुहुन्छ - यो लाभ बनाउने प्रतीक हो। यो एक लामो र स्वस्थ जीवन को एक हर्बल पनि हुन सक्छ। रक्त बिना कुनै व्यक्ति दाँत कसरी देख्न सकिन्छ, त्यसपछि आउँदै गरेको परीक्षण र समस्याहरूको सामना गर्नको लागि यो संचित शक्ति र ऊर्जाको लायक छ। यो पनि एक संकेत हुन सक्छ कि तपाईं वास्तविक जीवन मा यस व्यक्ति को बारे मा चिंतित हुनुहुन्छ। सो, जहाँ दाँत गिर्यो, र तपाईं यसलाई घुसाउन प्रयास गर्ने, नजिकका आफन्तहरुसँग झगडा र विवादहरूको उद्भव भविष्यवाणी गर्दछ। यदि तपाईंले दन्त चिकित्सकका कार्यहरूको कारणले गर्दा दाँत गुमाउनु भयो भने तपाईले केहि प्रकारको रोगको आशा गर्नुपर्दछ।
शरद ऋतु इलिनोक्स - लक्षण र अनुष्ठानको दिन
मृत बिल्लीको बारेमा के सपना देख्नुहुन्छ?
खैरो कपालको सपना किन?
कालो कुकुरको बारेमा कस्तो सपना छ?
यदि आवरण बर्फिरहेको छ - एउटा चिन्ह
सपना व्याख्या - दांत, कसरी त्यस्ता सपनाहरु व्याख्या गर्न को लागी?
विस्फोट कस्तो लाग्छ?
मलाई किन रातो छ?
अरू कसैको रगतको सपना किन?
कब्रको सपना किन?
सपना सपना खोज्ने एक बच्चा हो र त्यस्ता सपनाहरूको व्याख्या कसरी गर्ने?
घरपरिवारको सपना कस्तो छ?
Panteleimon क्यान्सरको पर्व - के गर्न सकिँदैन?
हड्डी कस्तो देखिन्छ?
फैशनेबल कपडा डिजाइनर
Yverdon-les-Bains को महल
Vaginitis - उपचार
अण्डा आहार2हप्ताको लागि
चार्जिज थेरोनले पहिले भन्नुभयो कि उनले किन सेन पीनसँग भागे
प्लास्टिक प्यानलहरू संग छत समाप्त गर्दै
स्कर्ट ग्रीष्म 2017 - नयाँ सिजनमा के गर्नु पर्छ?
हाम्रो रायमा वेलेंटाइन दिवस: सबैभन्दा धेरै हतोत्साहित रोमान्टिक्सको 25!
Sheepskin कोट Tuscany देखि
बहुलक मिट्टीले आफ्नै हातबाट शिल्पहरू
कुत्तहरुको लागि सूर्यको बेड
ब्रोंकी कसरी सफा गर्ने?
बुखारेस्ट - पर्यटक आकर्षणहरू
Aeroyoga - लाभ र हानि
निम्न extremities को Endarteritis
बच्चाहरु Ornella Muti
कोको "नेसिक" - राम्रो र खराब
एन्जिलिना जोली जनी डिपपसँग मित्र भए
पास्ता संग पालक
नाशपाती "सम्मेलन" - किस्मको विवरण
एल्ल बाल्डविनले स्वीकार गरे कि उनीहरूका युवाहरूमा तिनले लागू औषधि प्रयोग गरे